Topnepalnews.com | संगीतमा छुट्टै पहिचान बनाउने सपना थियो
Posted on: May 03, 2016 | views: 198
ढाकाडाम–२ सल्यानका रामु खड्का २०६४ मा काडमाडौँ पसेका हुन् । उच्चशिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं पसेका खड्का त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् । अध्ययनका लागि काठमाडौं पसेका उनले गीत–संगीतमा छुट्टै पहिचान बनाउने सपना साथै ल्याएका थिए ।
साधना कलाकेन्द्र, प्रदीप देवान र विभिन्न संघ–संस्थाबाट संगीतसम्बन्धी तालिम लिएका उनले काठमाडौं पसेको दुई वर्षमै ‘दुःख पाइछौ रे’ नामक गीत सार्वजनिक गरे ।
साधना कलाकेन्द्र, प्रदीप देवान र विभिन्न संघ–संस्थाबाट संगीतसम्बन्धी तालिम लिएका उनले काठमाडौं पसेको दुई वर्षमै ‘दुःख पाइछौ रे’ नामक गीत सार्वजनिक गरे । श्रोता तथा दर्शकले गीत अत्यधिक मन पराए । उनलाई ऊर्जा प्राप्त भयो । त्यही ऊर्जाले अहिलेसम्म उनले चार सय गीतमा संगीत भरेका छन् । ६ वर्षमा चार सय गीतमा संगीत भर्नु सामान्य काम होइन ।
६ वर्षमा चार सय लोकदोहोरी गीतमा संगीत भर्ने अरू पनि होलान् ? भन्ने पंक्तिकारको प्रश्नमा संगीतकार खड्काले सुनाए, ‘६ वर्ष यति धेरै लोकदोहोरी गीतमा संगीत भर्ने सायदै होलान् ।’ के कारणले उनले यति धेरै गीतमा संगीत गर्ने मौका पाए होलान् ? उनको स्वीकारोक्ति थियो, ‘म पश्चिमको मानिस ।
जहाँ मौलिक संस्कृति, लोकपरम्परालाई बढी माया गरिन्छ । लोकसंगीतप्रति यति धेरै माया हुँदाहुँदै पनि कलाकार कम थियौँ । तर, मैले संगीतमा हात हालेपछि धेरै कलाकार उत्पादन भए । त्यसपछि उहाँहरूको सहकार्यमा यो काम सम्भव भयो ।’
जहाँ मौलिक संस्कृति, लोकपरम्परालाई बढी माया गरिन्छ । लोकसंगीतप्रति यति धेरै माया हुँदाहुँदै पनि कलाकार कम थियौँ । तर, मैले संगीतमा हात हालेपछि धेरै कलाकार उत्पादन भए । त्यसपछि उहाँहरूको सहकार्यमा यो काम सम्भव भयो ।’ संगीतकार खड्का भाग्यमानी पनि छन् । उनले पहिलोपटक संगीत भरेको गीतले इमेज अवार्ड पाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय लोकदोहोरी संगीत प्रतिष्ठानले गरेको अवार्ड, स्टार एफएम अवार्ड, म्युजिक अवार्ड पनि हात पार्न सफल भएका छन् । एक अग्रजबाट धोका पाएपछि आफैँले संगीत थालेका उनले थालेको कामले निरन्तरता पाएकै छ । निरन्तरतासँगै चर्चा पनि ।
उनले म्युजिक कम्पनीसमेत खोलेका छन् । संगीतकारले म्युजिक कम्पनी खोल्नुको स्वार्थ त हुन्छ नै । उनको मान्यता छ, ‘अहिले डिजिटल मार्केट धराशयी बन्दै गएको छ । संगीत धेरै दुःखले भरिएका हुन्छन् । त्यसमाथि म्युजिक कम्पनीको चित्त बुझाउनु सकिएन भने अर्को समस्या आइपर्छ । यस्तो कलाकार लेऊ, यो गर, त्यो गर भनेर दुःख दिने गर्छन् । मसँग काम गर्ने कलाकारले त्यस्तो समस्या भोग्न नपरोस् भनेर आफैंले कम्पनी खोलेको हुँ ।
गायक तथा संगीतकार खड्का गीतकार पनि हुन् । तर, आफूलाई गीतकारभन्दा लय संकलक भन्न गौरव ठान्छन् । गीत–संगीतमा लागेर जीवन धान्ने कमै छन् । तर, खडा्काले गीत–संगीतबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
त्यस अर्थमा पनि उनी भाग्यमानी पनि हुन् । एउटा गीतमा संगीत भरेबापत २० हजार रुपैयाँ लिने उनले दोस्रोपटक काम गर्ने सोही व्यक्तिसँग मिलाएर पारिश्रमिक लिने गरेको बताउँछन् । उनले वास्तविकता सुनाए, ‘नत्र अर्कोपटक मान्छे फर्केर आउँदैनन् । मैले पारिश्रमिकको मामिलामा अन्याय गरेको भए ६ वर्षमा चार गीतमा संगीत भर्न सम्भव थिएन ।’
प्रस्तुति : दीपेन्द्र राई / नँया पेज बाट